सर्वाधिक उपर्युक्त बिवाईडीका विद्युतीय सवारी साधनहरू
नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साईमेक्स इन्कले सञ्चालन गर्दै आएका चार्जिङ स्टेसनका उपकरणबाट चार्ज गरिने बीवाईडी ईसिक्स सामान्यतः ४५ मिनेटदेखि १ घण्टामा पुरा चार्ज गर्न सकिन्छ । चार्जिङ गर्नका लागि लाग्ने बिजुलीको खर्च हिसाब लगाउँदा प्रतिकिलोमिटर रु. २.५० पर्ने देखिन्छ ।
विश्वभरि चर्चित बीवाईडी
बीवाईडी द्रुत गतिमा विश्वभरि फैलिएको व्यापारिक प्रतिष्ठान हो । सन् १९९५ मा चीनमा स्थापना गरिएको बीवाईडी कम्पनीको पुरा नाम Build Your Dreams क अर्थात् ‘साकार तपाईंको सपना’ हो । सूचना प्रविधि, सवारी साधन, नवीन ऊर्जा र रेल यातायात बीवाईडीका चार थरीका उत्पादन र सेवाहरूले विश्व बजारमा प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेको छ ।
न्यूनतम वजन र न्यूनतम आयतनका अधिकतम विद्युतशक्ति सञ्चय हुने ब्याट्री उत्पादन गरेर संसारभरि नै उपलव्ध गराउन यो कम्पनी अत्यन्त सफल रहेको छ । यस प्रकारको उत्पादनका लागि बीवाईडी चीनमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने संसारभरिका उत्पादकहरूमध्ये चौथो मानिएको छ ।
बीवाईडीले उत्पादन गरेका ब्याट्रीहरू मोबाइल फोनहरूका लागि र सवारी साधनहरूका लागि उपयुक्त र सहज छन् । संसारभरिका उपभोक्ताहरूका लागि यी दुई उपभोग्य वस्तु सहज र सरल तुल्याउनै पर्ने आजको विश्वको मागलाई बीवाईडीले अवसरको रुपमा लिएको छ र सफलता पूर्वक सम्बोधन गरेको छ । बीवाईडीले उत्पादन गरेको लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री संसारभरि उत्पादित यस प्रकारका ब्याट्रीहरूको कुल आयतनमध्ये २०% हुन्छ ।
विश्व बजारमा विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराएको हिसाबले यो कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहेको छ । सन् २०१६ मा १६,००० वटाभन्दा बढी बससमेत गरेर १००,१८३ वटा बिक्री गरेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्थात् उपयुक्त अध्ययन र अनुसन्धान समेत गरेर बिजुलीबाट चल्ने विभिन्न प्रकारका उच्चस्तरीय सवारी साधन उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नमा बीवाईडीले प्रतिष्ठाको उचाइ लिइसकेको छ । प्रगतिपथमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको बीवाईडी मात्रै एउटा त्यस्तो प्रतिष्ठान हो जसले जापानमा समेत विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्नका लागि आफ्नै कारखाना स्थापना गरेको छ ।
नेपालको विद्यमान अवस्थामा चुनौतीका रुपमा रहेको विद्युतीय सवारी साधनको भरपर्दो विकल्पको रुपमा आफ्नो उत्पादनमध्ये एउटा विश्वभरि मन पराइएको ब्रान्ड लिएर बीवाईडी प्रवेश गरेको छ । खनिज इन्धन आयात गर्न लाग्ने खर्च जोगाउन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै वातावरण जोगाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधन मात्र भरपर्दो विकल्प रहेको विद्यमान अवस्थामा बीवाईडी नेपाल प्रवेश गर्नु एउटा अत्यावश्यक परिघटना हो ।
बीवाईडीको नेपाल प्रवेशले विद्युतीय सवारी साधन आपूर्ति र सार्वजनिक सवारी साधनका लागि पनि सम्भावना सरल भएको छ । बीवाईडीका उत्पादनहरूमध्येका बिजुलीबाट चल्ने बसहरू र कारहरू विश्वका मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक सवारी साधनका रुपमा सफलतापूर्वक सञ्चालित छन् । सार्वजनिक यातायातको लागि विद्युतीय सवारी साधन अत्यन्त उपयुक्त भएको उदाहरण विशेष गरी विकसित मुलुकहरूका व्यस्त सहरहरूमा सफल र सहज भएको अनुभवबाट अनुकरण गर्न सकिन्छ ।
प्रदूषणको हिसाबले हेर्दा एउटा ट्याक्सी कारले १२ वटा सामान्य कार बराबर वा १२० वटा मोटरसाइकल बराबरा प्रदूषण गर्छ । त्यसैगरी एउटा साधारण बसले ३० वटा कारले गर्ने बराबर प्रदूषण गर्छ भने नेपालको सन्दर्भमा यहाँ भएका कुल यातायातका साधनमध्ये ७% मात्र सार्वजनिक यातायातका लागि हुन् । ती सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले सबै यातायातका साधानहरूबाट हुने कुल वायु प्रदूषणको अनुमानित आयतनको ४३% हुने गरेको छ ।
बीवाईडीको उत्पादनमध्ये बीवाईडी ईसिक्स नेपालको लागि उत्कृष्ट गाडी हो । ‘बीवाईडी ईसिक्स’ भनेर चिनिने क्रसओभर सेगमेन्टका गाडीहरू नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने विद्युतीय सवारी साधन हो । यो क्रसओभर प्रकारको हो र कारभन्दा सहज र सुविधायुक्त एसयुभी बराबरको हो । विश्वस्तरका कुनै पनि ब्रान्डको गाडीमा हुने सबै सुविधा यो गाडीमा राखिएका छन् । यसमा दुई घण्टा समय दिएर एकपटक पुरा चार्ज गर्दा ४०० किलोमिटर चलाउन सकिने लिथियम ब्याट्री राखिएको छ । चारहजार साइकल चार्ज गर्न सकिने भनिएको बीवाईडी ईसिक्समा राखिएको ब्याट्रीको आयु २० वर्ष हुन्छ । परीक्षणबाट सिद्ध भएको छ कि ७,५०,००० किलोमिटर चलिसक्दा पनि दक्षतामा यथावत् रहेको छ भने ४,००० साइकल पछिपनि दक्षता ८०% रहने नै छ । चार हजार साइकल भनेको चार सय किलोमिटर ४ हजार पटक गाडी चलाउन पुग्ने विद्युत्शक्ति सञ्चय गर्ने क्षमता हो ।
गत डेढ वर्षदेखि बीवाईडी ईसिक्स चढ्दै आउनुभएका नेपालका एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको अनुभवमा दुईवटा बीवाईडी ईसिक्स बराबरको मूल्यको गाडी भन्दा यो गाडीबाट बढी सन्तुष्टि पाइन्छ । त्यसैगरी खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गरी बिक्री–वितरण गर्दै आउनुभएका अर्का प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको मूल्यांकनमा बीवाईडी ‘सुपर्ब’ हो ।
त्यस कम्पनीले कार, बस, मेट्रो, मोनोरेल लगायतका विद्युतीय यातायातका साधनहरू उत्पादन गरी चीनमा र विश्वभरिका थुप्रै मुलुकहरूमा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने विश्वका ६० मुलुकका २ सय सहरहरूमा बीवाईडी ईसिक्स प्रवेश उपस्थित भैसकेको छ । खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीहरू भन्दा बीवाईडी ईसिक्स सुरक्षित, आरमदायी, विभिन्न उपकरणयुक्त छ । यस विद्युतीय सवारी साधनमा फ्रान्समा बनेको विशेष किसिमको सीसा प्रयोग गरिएको छ ।
Salient Feature of BYD
Market Leader in Electric Vehicle Segment in 2015, 2016 and 2017
Has introduced BYD e6 in Nepal
Runs 400 KM on single charge
A/C Fast Charging and Normal Charger available, 45 mins for full charge in fast charging
20 Years Battery Life, Lithium Iron Ion Phosphate
5 years company warranty and5years guarantee for the battery and major parts
एक पटकको पुरा चार्जबाट ४०० किलोमिटर चलाउन सकिने बीवाईडी ईसिक्समा ८० किलोवाट लिथियम आयोन फस्फेट ब्याट्री राखिएको छ । ग्राडेन्स अनुपात ३० प्रतिशत भएकोले उकालो सहजतापूर्वक चढ्ने क्षमता बीवाईडी ईसिक्समा छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स १ सय ५५ मिलिमिटर छ ।
नेपालमा चलाइएको मध्ये हालसम्म २८,००० किलोमिटर चलेको बीवाईडी ईसिक्सले मर्मत सम्भारको नाममा रु. २,००० मात्र खर्च गरेको अनुभवका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि मर्मत सम्भार खर्च कम लाग्छ भन्ने भनाइ पुष्टि हुन्छ भने यो बीवाईडीको विशेषता मान्न सकिन्छ ।
बीवाईडी ईसिक्समा पाँच वर्षसम्मका लागि ब्याट्री रिप्लेस्मेण्ट ग्यारेण्टी, दोस्रो पाँच वर्षसम्म वारेन्टीको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जडित ब्याट्रीको आयु २० वर्ष मानिएको छ र २० वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतसम्म दक्षता घट्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात २० वर्षपछि ७० प्रतिशत दक्षताबाट गाडी चलाउन सकिनेछ भने दक्षताको मूल्यांकन गरी कम्पनीले फिर्ता लिने र सोको बदलामा नयाँ ब्याट्री राखिदिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् २० वर्षपछि नयाँ ब्याट्री राख्नका लागि लाग्ने मूल्यमा पुरानो ब्याट्रीको मूल्य घटाएर बाँकी हुने रकम उपभोक्ताले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनहरूबाट हुने विभिन्न फाइदा बुझेर उपभोक्ताहरूको ध्यान बीवाईडीका विद्युतीय गाडीहरूमा पनि तानिएको विकसित अवस्थामा उपभोक्ताहरूको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखेर बीवाईडीका अधिकारिक विक्रेताले मुलुकका विभिन्न शहरहरू र मुख्य राजमार्गहरूमा समेत गरी ११ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ उपकरण राख्ने तयारी गरिएको छ ।